Apple iPad Air , Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition ) နဲ့ ASUS Transformer Pad TF701T တို့နှိုင်းယှဉ်ချက် (Review) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Apple iPad Air , Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition ) နဲ့ ASUS Transformer Pad TF701T တို့နှိုင်းယှဉ်ချက် (Review)
Posted on November 16, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	Apple ဟာ ပြီးခဲ့ရက်သတ္တပတ်က ပါးလွှာပြီး ပေ့ါပါးတဲ့ iPad Air ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ iPad Air ဟာ အရင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ Apple products တွေထက် ပိုပြီးသာ လွန်ကောင်းမွန်ပေ မဲ့လည်း လူအများ ရဲ့စိတ်ဝင် စား မှုကို အရမ်းကြီးထိရောက်မှုမရှိစေခဲ့ပါဘူး။ နောက်ထပ် iPad Air နဲ့အပြိုင်ထွက်ရှိလာတဲ့ Product တွေဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition ) နဲ့ ASUS Transformer Pad TF701 တို့အကြောင်းကိုပြောကြည့်ကြ မယ်ဗျာ။ Product နှစ် မျိုးစလုံးရဲ့ screen size ကတော့ 10.1″ display နဲ့ screen resolution ကလည်း 2560 x 1600 pixel ရှိပါတယ်။
iPad Air ရဲ့ 469 g သာအလေးချိန်ရှိတဲ့ aluminum ကိုယ်ထည်ကတော့ အားလုံးထက်သာလွန်ကောင်း မွန်တဲ့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပါးလွှာလွန်းလှတဲ့ဘေးဘောင်လေးတွေကလည်း သူ့ကို ယှဉ်ပြိုင်နေ တဲ့ android devices တွေကိုအံ့သြမှင်သက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ASUS Tramsformer Pad ရဲ့ aluminum ကိုယ်ထည်ကလည်း apple ရဲ့ ဒီဇိုင်းကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခုချင်းစီကို လိုက်ပြီးရေးပြနေလို့ရှိရင် ရေးလို့ကုန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ အချက်အလက် specification တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်အောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Apple iPad Air==========
OS = iOS7Display = 9.7″ IPS LCDResolution =2048 x 1536 (299 ppi)Height = 240mmWidth = 168.5 mmThickness = 7.5 mmWeight = 469gramsProcessor = Apple A7 Chipset (64 bits) Dual – Core 1.3 GHz Krait 400 GPU =Power VRG 6430 .RAM = 1GBStorage = 16 GB / 32 GB / 64 GB / 12S8 GB Micro SD card slot = NoPrimary Camera = 5MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash,1080 p@30fps , HDR , video stabilization touch focus, face detection Front Camera = 1.2 MP 720p@ 30fpsBattery = Up to 10 hours of battery lifeWi Fi = Wifi 802.11 a/b/g/n, dual-band,Wi-Fi hostpot , AirPlayBluetooth = Yes, v4.0 with A2DPNetwork = Quad-bnad GSM/ GPRS / EDGE Quad- band UMTS/ HSPA Penta- bnad LTE supportNFC = NoSpeakers = MonoDistinctive features = iOS has the best tablet apps aroundAvailability = November, 2013
Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 edition )===========================
OS = Android 4.3 Jelly BeanDisplay = 10.1 ” Super Clear LCDResolution = 2560 x 1600 (299 ppi)Height = 243.1mmWidth = 171.4 mmThichness = 7.9 mmWeight = 535 gramsProcessor = Snapdragon 800 chipset Quad -cord 2.3 GHz Krait 400GPU = Adreno 330RAM =3GB Storage = 16 GB/ 32 GB / 64 GB MicroSD card slot = Yes. up to 64 GBPrimary Camera = 8 MP. 3264 x 2448 pixels auto- focus camera, face detection , HDR mode, panorama , geo tagging ; Full HD (1080p) video recording at 60 fpsBattery = Li-Ion 8 , 220 mAhWi Fi = Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual- band, WiFi Direct , DLNA , Wi-Fi hostpotBluetooth = Yes, v4.0 with A2DPNetwork = Quad -band GSM / GPRS/ EDGE Quad- band UMTS/ HSPA Hexa-band LTE supportNFC = YesSpeakers = Stereo Distinctive features = iOS has the best tablet apps aroundAvailability = October , 2013
ASUS Tramsformer Pad TF701T=====================
OS = Android 4.2.2 Jelly BeanDisplay = 10.1″ IGZO IPS LCDResolution = 2560 x 1600 (299 ppi)Height = 263 mmWidth = 180.8 mmThickness = 8.9 mmWeight = 585 gramsProcessor = Tegra4T40 X chipset Quad – core 1.9 GHz Cortex-A15GPU = GeForce GPU RAM =2GB Storage = 32 GB / 64 GBmicro SD card slot = Yes, up to 64 GB Primary camera =5MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus camera, face detection, HDR mode, panorama, geo – tagging; 1080p video recording @ 30 fpsFront = 1.2 MPCamera = 720p@30fpsBattery = Li – Ion 7820 mAhBattery = Li- Ion 7,820 mAhWi-Fi = Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wifi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Bluetooth = Yes, v3.0 with EDRNetwork = N/ANFC = No Speakers = MonoDistinctive features = Mobile Dock withafull- size QWERTY keyboard and 4,170 mAh batteryAvailability = October 2013 ဒီလောက်ဆိုရင် အကြီးမားဆုံး tablet တွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို တွေ့မြင်နိုင်ပါပြီ။ iPad Air အတွက်ကတော့ သိပ်ပြေစရာ မလိုလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Android ဘက်မှာတော့ အကောင်း ဆုံး multitasking အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ tablet တွေက samsung ရဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)မှာကတော့ အားလုံးမတူတဲ့ S Pen ပါရှိတာကတော့ samsung ရဲ့ user တွေကတော့ မပြောပဲ သိနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
နာက်ထပ် ASUS ရဲ့ Transformer Pad TF701Tက mobile dock system လို့ပြောနိုင်တဲ့ battery အပိုပါရှိတာရယ်၊ QWERTY keyboard က external အနေနဲ့ ပါရှိတာရယ်တွေက ASUS products ရဲ့ အားသာချက်လို့ပြောလို့ပါတယ်။ ဘာ ပဲပြောပြောပါ Apple ရဲ့ products ဖြစ်တဲ့ iPad Air ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ ယှဉ်ပြိုင်မှု တိုင်းမှာတော့ အောင်မြင်ဆုံး သရဖူကိုဆောင်းထားနိုင်နေမြဲပါပဲ… အသုံးပြုတဲ့ user တွေအနေနဲ့ ကိုယ်ဘာ နဲ့သင့်တော် တယ်ဆိုတာကိုတော့ရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုစေ ချင်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အားသာ ချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော် ရေးပေးထားပါတယ်။ အပေါ်က အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလေ့ လာပြီးမှဝယ်ယူဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်တာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
Aung Ko Htet အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေ မပြေသည်ဖြစ်စေ ကျေးဇူးပြု၍ Comment ပေးခဲ့ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Comment တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် post တွေရေးဖို့ အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။
Aung Ko Htet (www.itstudier.com)
← My Talking Tom v1.0 Modded Unlimited Money Apk	Android ဖုန်းနဲ့ ဂစ်တာ တီးမယ်ဆို ဒါလေးယူထား Solo v1.62 Apk →